PressReader - Ilanga: 2018-07-05 - U-EYMAEL AKABONWA EJIMINI YE-FFS
U-EYMAEL AKABONWA EJIMINI YE-FFS
ISICUPHE ngomunye umqeqeshi iFree State Stars eqale amalungiselelo esizini entsha iphonselwe njengoba engakabuyeli eNingizimu Afrika uLuc Eymael waseBelgium leli phephandaba elisanda kubika ukuthi uhlinzwe amehlo.
ILANGA lithole ukuthi le kilabhu yakwaMokoena seyiqashe uDuncan Lechesa njengenhloko yabazoyithungathela abadlali. ULechesa kuthiwa kucushwe ngaye ukuba aqhubeke nomsebenzi uma egcina ngokungabuyi u-Eymael okuvela ukuthi uyinyama emakilabhini ehlukene akuleli. Kuthiwa uLechesa uzosizwa nguThemba Sithole uma engabuyi u-Eymael.
Leli phephandaba libuye lathola ukuthi isezingxoxweni eseziku- vuthondaba noSiphelele “Shaka Zulu” Mthembu ongumgadli ukuba avuselele inkontileka yakhe. UMthembu uzakhele ugazi kubathandi bale kilabhu ngokudlala ngokukhulu ukuzikhandla kumafolosi ale kilabhu ebambisene noHarris Tchilimbou benoMohamed Anas osanda kujoyina iPolokwane City.
URansie Mokoena oyiMenenjajikelele yeStars, uvumile ukuthi basezingxoxweni noMthembu azwakalise ukuthi bazomdinga kakhulu njengoba bezokube begijima kwiCaf Confederation Cup ngesizini ezayo.
“Simatasa nendaba kaMthembu. Ngicabanga ukuthi konke sizokwazi ukukuqeda ingakaqali isizini ezayo. Ngokwamalungiselelo okwamanje konke kusahamba kahle. Sesiziqalile izinhlelo zesi- zini entsha yize umqeqeshi engabuyi njengoba silindele ukuba afike lingakapheli leli sonto,” kusho uMokoena.
Ukuphikile ukuthi basezinhlelweni zokulanda omunye umqeqeshi ezeseka ngokuthi bakholwa wukuthi izinkinga ezihaqe u-Eymael sezixazululekile. Uthe umlindele namuhla kuleli. Uvumile ukuthi uLechesa usethathe isikhundla sokuhlwaya ithalente kule kilabhu.
ULechesa kufana nokuthi ukhuza ibuya kule kilabhu kwazise wayengumdlali wayo phambilini ngaphambi kokubeka amakhokho ethala.
UMokoena uthe bakholwa wukuthi uLechesa uzokwazi ukusiza ikilabhu ayithungathele abadlali kwazise kabakholelwa ekubathengeni.